सैनिक मल - परिहास - नेपाल
काठमाडौँको मुटुमै शाही नेपाली सेनाको बिजनेस मल पनि खुल्ने भएछ । त्यही मलमा रहेको दन्त अस्पताल त सुरु नै भइसक्यो । अरु मल र यो मलमा फरकै यही हो । अरु मलमा भए पसलहरूसाग सिनेमा हल हुने गथ्र्यो । यहाा चाहिा पसलहरूसागै अस्पताल रहन गएको छ । बिजनेस कम्प्लेक्समा अस्पताल ! नयाा प्रयोग हो ।
अब जहाासम्म बिजनेस मलको कुरा छ, सेनाको मल भनेपछि त्यहाा कस्तो पसल राखिन्छ होला ? यो भने सोच्नै पर्ने हुन्छ । सेनाको मल भने पछि त्यहाा सैन्य वस्तुकै पसल राखिनु पर्‍यो । जस्तो कि बम, गोला, गोली, पेस्तोल, राइफल, बन्दुक, म्याग्जीन, मोर्टार, मेसिन गन, जिलेटिन आदि । यस्तो सामान अरु कुन मलमा किन्न पाइन्छ र ? कहीँ पनि पाइादैन । पाइने भनेको सैनिक मलमै हो ।
यदि सैनिक मलमा यस्ता सामान किन्न नपाइने हो भने त्यो अरु पैसा कमाउन खोलिएको मलभन्दा कहाा फरक हुन्छ ?